Semalt: Webhu Rokukwezva Nemafu Akanaka
Nhasi kune nzira dzakawanda dzekuti vanhu vakwanise kubudisa data kubva pamapeji ewebhu akasiyana-siyana. Mawebhusayithi akawanda, saGoogle na Facebook, anopa APIs kuti vatsva vewebhu vanogona kushandisa kuti vawane zvido zvose zvavanoda. Asi kwete mapeji ose ewebhu ane ma API, nokuti vangave vasingadi vaverengi vavo kuti vaunganidze chero ruzivo rwenzira kubva kwavari kana kuti havasi vakagadzirwa nekombiki yepamusoro. Asi chii chinogona web scrapers kuita mumhando iyi yematambudziko? Vanogona sei kubvisa deta kana mamwe mapeji ewebhu asingashandisi API? Ichokwadi ndechokuti vanogona kunyatsotsvaga mawebhusayithi nenzira dzakawanda - ?????? ???????? 91h.
Shandisa Google Docs yeZvitsa Zvibereko
Nokushandisa Google Docs, vanogona kutora zvese zvavanoda. Vanogona kuishandisa kune inenge yose mitauro yepurogiramu, yakadai sePython. Python ishoko rakasimba kwazvo remitauro, iyo iri nyore kushandisa uye inotendera mapurogiramu kuti aungane basa ravo kunyika chaiye. Inobvumira vashandisi vayo kuti vataure pfungwa dzakasiyana-siyana mumiganhu yeikorodhe iyo imwe mimwe mitauro, seJava.
Mushonga Wakanaka (Python Library): Chimwe Chinhu Chisingakonzerwi ZveMabasa Anokurumidza
Raibhurari yePython inobvumira kutsauka nokukurumidza pa mapurogiramu ewebhu uye inopa mabhuku akawanda kuti aite imwe basa. Semuenzaniso, BeautifulSoup ibasa rakaoma rekuita nekukurumidza, sekutsvaga data dzakasiyana-siyana, sezorodzero, mahofisi, matafura nezvimwe. Chaizvoizvo, BeautifulSoup inopa vashandisi vayo nzira dzakanaka uye dzinobatsira kufamba, kutsvaga nekugadzirisa mamwe data. Nokuti, muenzaniso, zvinotora gwaro re HTML, uye rinoshandura iyo, nekugadzira chimiro chakafanana mumusoro. Uyezve, inoshandura kamwe-kamwe chero mapepa anouya kuUnicode, saka vashandi haafaniri kufunga nezvekuguma.
Nhengo dzeSupa Yakanaka
Vashandi vanogona kuisa chigadzirwa ichi chinobudirira mune zvose zveWindows neLinux systems. Zvadaro, vanogona kufamba uye vadzidze kushandisa nzira yacho nyore. Vanogona kuona mienzaniso yose yakakodzera kuti vawane pfungwa yekuti vachazoshandisa sei hurongwa huno. Mienzaniso iyi inogona kuvabatsira kuti vanzwisise nzira iri nani. Ndiyo mazano anobatsira ekuzive zviri nani sei iyo inokwanisa kurasa dheti kubva pamapeji akasiyana ewebhu.
Inoita kuti data yakadzingiswa ione seyimbo rekutanga. Asi mumamiriro ezvinhu apo pane zvimwe zvikanganiso mune imwe nyanzvi, Mushonga Wakanaka unozviisa kunze uye unopa vashandisi vayo sarudzo yakanaka. Beautiful Soup inopa mamwe makuru, iyo inopa HTML mazita mazita, kuita kuti zvive nyore nyore kune vashandisi. Web scrapers vanoda kukurangarira, somuenzaniso, kuti chimwe chinhu chinogona kuva nemhando zhinji yemakirasi uye kirasi inogona kugoverwa muzvinhu. Chimwe nechimwe chezvinhu izvi chinogona kunge chiine id imwe chete, iyo inogona kushandiswa pane peji kamwe chete. Mushonga Wakanaka ipurogiramu yakanaka, iyo yakagadzirirwa kunyanya kumapurogiramu akaita web web scraping. Inopa dzimwe nzira dzakajeka kuti vashandisi vayo vashandure mutambo wepakati. Purogiramu iyi yemutauro inokurudzirwa pamusoro pezvinyorwa zvakanakisisa zvePython, saLXML uye yakanyatsochinja. Ichokwadi, inowana data yakavharwa uye inounganidza mashoko ose anodiwa kune web scrapers mukati memaminitsi.